Uhlelo oluzohlanganisa abazothandana
IQOPHASIKHUNGO sohlelo olusha lokuthungatha umaqondana oluzoqala ngenyanga ezayo
NOKUBONGWA PHENYANE | September 12, 2019
ISITESHI seM-Net DStv (101) simemezele ukuthi sizoba nohlelo oluzohlanganisa abantu abezobe behlwaya abazothandana nabo.
Ukuthungatha abantu abazohlanganyela kwiFinding the One kuqale nyakenye.
Indoda noma owesifazane obheka ozothandana naye uhlangana nabantu abahlukene abese ekhetha abambalwa abona ukuthi bangaba yile nto ayifunayo.
Kuba khona imigudu embalwa abayihambayo ngaphambi kokuthi bavumelane ngakwezothando noma bahlukane uma ucu lungahlangani entanyeni.
Isiqephu sokuqala sizoqala ngo-Okthoba 6 ngo-6 ntambama.
Abenzi bohlelo, olukhiqizwa yinkampani Okuhle Media, bathembisa injabulo yodwa ezobe ihambisana nezinyembezi kwesinye isikhathi.
ULani Lombard we-M-Net uthe uma kuya ngendlela uhlelo olwathakaselwa ngayo luqala ukubonakala usuku lwangeSonto ngeke lusafana.
“Okujabulisa ngalo nje okokuqala wukuthi lususelwa kuleli futhi luqoshwe khona. Kulo kuzobonakala indlela ejwayelekile lapho owesilisa noma owesifazane ezobe echaza ngokungamelani nesizungu osekwenza ukuthi afune umaqondana.
“Kuzobe kungeyena umuntu oyedwa kodwa ngabantu abahlukene abazobe bedinga uthando. Uma nje sekukhona abakhethene sizoqhubeka nomsebenzi wokubheka ukuthi ngabe bayile nto omunye nomunye ayifunayo.
“Uma sebekhethene bazobe sebecela noma wubani emindenini yabo, abangani babo, abantu abasebenza nabo, abazobe bemazi kangcono umuntu wabo, ukuthi babakhethise ukuthi ubani olungele omunye,” kusho uLani.
Uthe abakwenzile wukukhetha abantu asebezame kaningi ukuzitholela omaqondana kodwa bangabi nayo inhlanhla.
“Kuzobonakala imidlalo ehlukene abazobe behlanganyele kuyo abangenele uhlelo.
“Kuzoba khona izikhathi lapho bephuma beyohlala bonke ngokuhlukana babuzane imibuzo eyehlukene, uma kukhona abachazekile bazothola ithuba lokuthi babakhethe bese beya esidlweni esikhethekile endaweni yangasese okuyilapho kuyobonakala khona ukuthi kuyayeka phambili noma cha,” kusho uLani.
Usomahlaya uRob van Vuuren, uzobe etshela abasohlelweni ukuthi yini okumele bayenze ezigabeni ezahlukene abazobe bezenza.